MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2012 » september
Wasiir ku xigeenka caafimaadka Somaliland oo furtay tabobar talaalka ku saabsan
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	hooyooyin ilma galeenkoodii ugu deeqay laba hablood oo ay kala dhaleen
Waxaa wiigan gudihiisa dunnidka ku soo korodhay aqoon cusub oo aan dunnida hore uga dhicin. Waxaa magaalada 2 aad ee ugu weyn dalka Sweden, Göteborg, ka dhacday, gaarahaan dhakhtarka jaamacadda ee magaaladaas, Sahlgrenska University Hospital, qallin cajiiba oo aan dunnida hore loogu arag. Waa hooyooyin ilma galeenkoodii ugu deeqay laba hablood oo ay kala dhaleen. […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	wasaarrada caafimaadka Somaliland oo tabobar u furtay umulisooyinka dhakhtarada dalka
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Daawo sawirrada qayb ka mida dhakhtarka Hargeysa feberweri 2011
Halkan ka daawo sawirro aan ka soo qaaday qaybo ka mida dhakhtarka Hargeysa. Dhakhtarka Hargeysa oo qiyaastii la dhisay sannadku marku ahaa 1953. Dhakhtarka Hargeysa, wuxuu ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey ee laga dhiso geyiga ay soomaalidu degto wwakhtigaas. Waa dhakhtar taariikhiya, waxaana dhisay dawladda Ingiriiiska oo berigaa dalka Somaliland ka talinaysay. Dad badan oo ku […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Maxaad ka taqaana mishiinka yar ee wadnaha Pacemaker?
Waa maxay mishiinka Pacemaker, Yaa sameeyey, sannadkuu soo baxay, faa´ido inte le eeg ayuu leeyahay ama waa maxay sababta loo isticmaalo pacemaker ka? Qormada maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa mishiinka wadnaha la geliyo ee loo yaqaano pacemaker oo dunnida caafimaadka wax badan ku soo kordhiyey. Waxaa jira dadyow badan oo dunnida ku dul […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	KANSARKA
Unugyada jidhku waxa mar walba ku dhaca isbadel kuwaas oo ah in unugyadii hore lagu badalo kuwo cusub, waxaanay ku dhacdaa habka loo yaqaano qeybsanka unuga. Waxaana jira hab lagu kontroolo marka uu bilaabmayo ama dhamaanayo qaybsanka unugo si aanay u dhicin wax khalada ama aanay unugo iskaga samynin unugyo cusub oo dheeraad ah oo […]